စောစော ကထက် ပိုကောင်း တယ် – Grab Love Story
အဲဒိတုန်းက ကျနော်၉တန်းအောင် ခါစ နယ်သို့ ဦးလေးလင်မယား အလည်လာကြရင်းက ရန်ကုန်သို့လိုက်လည်ရန် မရမကခေါ်သဖြင့် လိုက်ခဲ့တယ် ဦးလေးတို လင်မယားက သားသမီးမရှိတော့ကျနော့်ကို ပိုဂရုတစိုက် လုပ်ပေးတယ် ကျနော့်ဦးလေးဦးရဲထွန်း နှင့်ဒီအရွယ်အထိဆုံဖူးတာဆို၍ ၄ကြိမ်လောက်ဦးလေးမိန်းမ အန်တီစန်းစန်းနဲ့ကအခုတခါ ဦးလေးရုံးသွားပြီဆို အန်တီစန်းစန်းကအဖော်ပြုတယ်
သို့သော်အစမို့မရင်းနှီးကျနော့်ပုံကကိုရိုးပုံရိုးအ စကားသိပ်ပြောလေ့မရှိ စိတ်ထဲမှာစကားလုံးတွေစီရင်းသာ အချိန်ကုန်လေ့ရှိတာမျိုးဒါပေသည့် ကျနော့်မှာအရည်အချင်း တစ်ခုမွေးရာပါပြောရမလားဘယ်သူကဘယ်လိုဘယ်လိုဆက်ဆံဘယ်လိုပြော ရတယ်ကအစသိတာ ဦးလေးရုံးသွားပြီးတော့ အန်တီစန်းစန်းကရေအတင်းချိုးခိုင်းတယ်
ကျနော်ကဘောလုံးကန်ဘောင်းဘီတိုကပ်ကပ်အန်တီစန်းစန်းကဘောင်းဘီစကပ်ပုံစံအထဲကအသားကိုမြင်ရတဲ့ အဖြူအပါး ရေအတူချိုးတယ် အန်တီစန်းစန်းဒီကနေ့အတော်လောနေတယ် ဒါ့ကြောင့်အတူချိုးတာဖြစ်မယ် သူ့ဘာသာရေတွေတဗွမ်းဗွမ်းလောင်း ပိုက်ကလည်းဖွင့်ထားသေး ခေါင်းလောင်းချိုးနေတာ ပြီးတော့မှ သတိရပြီးကျနော့်ကိုပိုက်အောက်ဝင်ခိုင်းတာ မျက်နှာပေါ်စီးကျရက်ကပင် အန်တီစန်းစန်း၏တင်သားဆိုင်ကြီးတွေက ချွတ်ထားသည့်အတိုင်း အမွှေးမည်းမည်းကြီးတွေနှင့် ပြောရအုံးမယ်နို့တွေပါဖော်ထားတာ ကျနော့်ကိုခလေးလိုသဘောထားတဲ့သဘောပေါ့ တစ်ကိုယ်လုံးဆပ်ပြာတိုက်ပြီးတော့ ရေဘားကိုပိတ်ခါ ကျနော့်ကိုဆပ်ပြာတိုက်ပေးတယ်
သားရယ်ခလေးပဲရှိသေးတာ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တဲ့ကျနော့ကိုတောသားခလေးဆိုပြီးလျှော့တွက်တာမိန်းမမလုပ်ဖူးဘူးထင်နေတာကျနော်အန်တီစန်းစန်းရဲ့အသားအရေလှတာတစ်ခုတည်းနဲ့တင်တစ်ကိုယ်လုံးနမ်းပစ်ခြင်တာ ရုပ်ကတော့ဆိုးတဲ့အထဲတောင်ပါသေးဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီးတောင်နေတဲ့လီးကို ပေါင်နဲ့ညှပ်ပြီးနောက်ထဲဖွက်ထားရတယ် တောင်နေတာလျော့အောင်ပေါ့ အမွှေးပေါက်စကိုကျနော်ရိတ်ထားတော့ သူကမထင်ရှာဘူးအမွှေးပေါက်တာကို ကျနော့်ပေါင်ကြားထဲဆပ်ပြာ နဲ့ပွတ်တယ်သတိထားမိပြီး “”သားပေါင်ကားထား ယောက်ျားလေးဆိုတာတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်း မှုရှိရတယ်ကွယ့်” “ကျနော့လီးကို လက်ကဆွဲယူပြီး ဆပ်ပြာတုံးကိုလှမ်းယူလီးကအန်တီစန်းစန်းလက်ထဲမှာတင်အဆမတန်ကြီးလာနေတယ်
ဆပ်ပြာတုန်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ အမြုပ်ထွက်အောင်ပွတ်ပြီးကျနော့်လီးကိုပြန်ကိုင်တယ် သေသေချာချာကိုကြည့်နေတယ်ဗျာ ကျနော်ကတော့ဘာမှမသိသလို ဘရပ်ရ်ှတစ်ခုကိုအသာယူခါ အာရုံဝင်စားနေတယ်ဆိုသလိုကျနော့်ကိုအကဲခတ်ရှိုးလိုက်သေးဆပ်ပြာပွတ်ရင်းကနေ သက်ပြင်းချသံကြားရတယ် နောက်တော့ဂွင်းထုပေးလာတဲ့အထိလီးကိုရေဆေးလိုက် ဒစ်ဖျားကို ဖြဲကြည့်လိုက် လက်သည်းနဲ့အရည်ပြားကြား ကိုထောက်ကြည့်တယ်
အား…””သားနာသွားလို့လား”” “”ဟုတ်ကဲ့ “”ခလေးအကွက်နင်းကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ရမလဲ “”အန်တီ စောစောကလို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးတာ ဇိမ်ရှိတယ်နော် “” “”သား ထပ်တိုက်ခြင်လို့လား”” “”ဟုတ်ကဲ့””အန်တီစန်းစန်းတချက်ပြုံးတယ် အဲဒိအပြုံးကိုကျနော်သိတာပေါ့ ဒီတခါတော့ ဆပ်ပြာနည်းနည်းလေးနဲ့အသာအယာ ဖီးတက်အောင်ထုပေးနေတယ် ကျနော်လရည်မထွက်အောင်လျှာ ကိုကိုက်ထားတယ် အလီတွေဆိုအာရုံလွှဲနေရတယ် ”
“ကောင်းလားသားလေး”” ကျနော်လည်း ပိုပိုသာပြောရတယ် “”စောစောကထက်ပိုကောင်းတယ်”” အန်တီစန်းစန်းပြုံးပြန်သည် “”ဒီထက်ကောင်းတာရှိသေးတယ် အင်းအဲဒါကို သားလုပ်ခြင်လား”””” ကျနော်ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ် သနားစရာပုံစံပေါ့ “”ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးနော်” “”ဘာဖြစ်လို့လဲ အန်တီ”” “”သားကြီးလာရင်သိလိမ့်မယ် သားလူပျိုဖြစ်ခါနီးပြီ အခုတောင်သားဟာက လူကြီးတွေထက်သာနေပြီ”
ကျနော့်လီးပေါ်ကဆပ်ပြာရည်တွေရေလောင်း ဆေးပေးတယ် ရေကအေးတော့ တောင်နေတာလျှော့သွားတယ် ကျနော့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေ ဖာသည်မကိုခေါ်ပြီးမှုတ်ခိုင်းဖူးတယ် ကျနော့်အတွက် ပထမမဟုတ်ပေမဲ့ တောသားလူလည်ပဲလေ အန်တီက လျှာဖျားလေးနဲ့ဒစ်ကို ပတ်လည်ရစ်တယ် တကယ့်ဆရာကြီးပဲ ဒါနဲ့ဦးလေးကိုချုပ်ထားတာပဲ ဖာသည်မထက်တောင် ကျွမ်းကျင်တယ် “အန်တီ သားခြေညောင်းလို့ “” အန်တီကမော့ကြည့်တယ် ”
“သားမလုပ်ခြင်တော့ဘူးလား”” “”လုပ်ခြင်သေးတယ်” ” ဒါဆိုပက်လက်လှန်” တဲ့ကျနော်ပဲလေ အန်တီ့ဘေးတိုက်ပက်လက်လှန်ပေး လိုက်တယ်အကြံနဲ့ အန်တီကဘယ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ကျနော့ဗိုက်ကိုယ်နဲ့ဖက် ဘေးကိုလက်ထောက်ပြီးစုပ်ပေးတယ် ပက်လက်အနေအထားကနေကြည့်ရင်း အန်တီ့ဖင်ကြီးက အတော်ကြည့်ကောင်းတယ် မှုတ်ပေးတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘော ကျနော်ကော့ပေးတယ် ကျနော့်ဆီးခုံကိုဖိပြီးရှေ့တိုးခါ လီးကိုအဆုံးထိသွင်းလိုက်စုပ်လိုက် အဲ့တော့ဖင်ကြီးက ကြွလိုက်ချလိုက်ဖြစ်လာရတယ်
ဒါကျနော့်ခလေးကွက်လေ ကျနော်ဖီးတက်ပြလေ အန်တီဇော တွေထန်လေပဲ ရင်ဘတ်တွေကိုလက်နဲ့နောက်ပြန်ပွတ်ပေး လိုက်သေး ကျနောမသိမသာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုကိုင်းပြီး အန်တီတင်ပါးကိုကိုင်လိုက်တယ် ခြေတွေလှုပ်ရမ်းပြီး ကောင်းနေတာကြောင့်ကိုင်မိတယ်ပေါ့ ဖင်ကြီးကြွတက်နေတုန်း လက်ခလယ်ကိုအလစ်ဝင်လျှို စောက်ဖုတ်ကိုချိန်ထားပေးလိုက်တယ် မတော်တဆလိုလိုပေါ့ အန်တီချိန်သားကိုက်ပြီးကို ကျနော့်လက်ခလယ်နဲ့စောက်ဖုတ် ကိုဖိပွတ်လာတယ် ပထမတော့မလှုပ်မယှက်ပေါ့ နောက်တော့အထဲဝင်အောင်ထိုးကလိပေးတာ ငြင်းဆန်တဲ့သဘောမရှိ ဖင်ကြီးကို ကျနော်ဆွဲယူတယ် အလိုက်သင့်ပါလာတယ် ကျနော့မျက်နှာနားအထိ ဖင်စအိုဝ ကို နှာခေါင်းနဲ့နမ်းတင်ပါးကြီးတွေဖက်ပေါ့ လီးကိုပါးစပ်ကချွတ်လိုက်ပြီး တံတွေးမြိုချပြီး “”သား သားလေး ခန “”ကျနော့်မျက်နှာပေါ်ခွထိုင်လိုက်တယ် ”
“သားအန်တီလုပ်သလို လျှာနဲ့နမ်း အီးပါတယ်ဖင်မဟုတ်ဘူး သေးပေါက်တဲ့ဖင်ကိုနော်”” ရီရတယ်နော် စောက်ဖုတ်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြပြီး “”ဒီနေရာလားအန်တီ””လို့ခလေးအထာနဲ့ “”ဟုတ်တယ်သား သားနမ်းတတ်သလိုနမ်းတော့ကွယ်နော် ဘယ်နှစ်နာရီရှိကုန်ပြီလဲမသိ”” အန်တီကျနော့်လီးကို ပြန်တောင်အောင်ဆွပေးရပြန်တယ် လုပ်ပုံက စိတ်မရှည်သလိုပဲ ကြမ်းလည်းကြမ်းတယ် နာလည်းနာတယ် အန်တီစောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးကြားထဲကနေ နီရဲပြဲကားနေတော့ လီးကပြန်တောင်တာပေါ့ အန်တီခပ်သွက်သွက်ကိုစုပ်နေတယ် ပထမတော့ နှာခေါင်းနဲ့လှည့်ပတ်နမ်းတယ် ဖင်ကြီးကိုဖိနှာခေါင်းနဲ့ပွတ်တာ လီးစုပ်နေတဲ့အန်တီ လီးကိုကိုင်ပြီး ခေါင်းမော့တက်သွားတယ် ”
“အား အင်း”” ပွတ်နေတာရပ်လိုက်တော့မှ ကျနော့်လီးကို ပြန်စုပ်ပေးဖို့သတိရတယ် အန်တီဖီးယူခြင်နေတာ ကျနော့်ကိုခလေးမို့ မလုပ်တတ်တာကို စိတ်ဆိုးရအခက် အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာ နှာခေါင်းနဲ့ပွတ်ဆွဲရင်းမှ လျှာလေးကိုအသာထုတ်လိုက်ပါရတယ် တော်ကြာရိပ်မိမှ စောက်ဖုတ်ဝကို လျှက်နေလိုက်တယ် အန်တီပေါင်ကိုကားပြီးကျနော့်လျှာ နဲ့တည့်အောင်ချိန်ပေးနေရှာတယ် အကွဲကြောင်းအတိုင်းလျှာပြားနဲ့မယက်တော့ပဲလျှာကိုစုချွန်ပြီး ယက်ပေးလိုက်တယ် ”
“အား အဲ့လိုသားလေးမှန်တယ် အဲ့တိုင်းနော် “” ခေါင်းကိုမော့ ဖီးတွေယူနေရှာတယ် လက်တစ်ဖက်ကိုထောက် လက်တစ်ဖက်က ဂွင်းထုပေးတယ် စောက်စိကို လျှာထိပ်နဲ့ဖိထိုး ချော်သွား လျှာနဲ့သိမ်းရစ် ပညာစုံကို တဖြည်းထုတ်သုံးလာရတယ် အန်တီဂွင်းထုဖို့တောင်မေ့နေတယ် မကြာဘူးအန်တီစောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေကျလာတယ် ကျနော်ယက်လို့မရတော့အောင်ကျနော့်မျက်နှာ အပေါ်ဖိထိုင်ပြီးပွတ်တယ်ဗျာ အသက်မနည်းခိုးရှူရတယ် အန်တီငြိမ်ကျသွားတယ် ပြီးတော့မှသတိရဟန်ဖြင့်”” သားမျက်နှာတွေပေကုန်ပြီ စောရီးသားလေးရယ် အန်တီ့သားလေးကို မျက်နှာသစ်ပေးမယ်”
“သားအန်တီ့ကို ယက်ပေးရတာ လုပ်ပေးခြင်စိတ်ရှိရဲ့လား”” “”ဟုတ်ကဲ့ အန်တီတောင်သားကိုစုပ်ပေးသေးတာပဲ အန်တီကို သားယက်ပေးတာ ကုသိုလ်တောင်ရသေးတယ်”” “”သားအန်တီပဲ အန်တီခိုင်းတာလုပ်ပေးရမယ်လို့ မေမေကမှာထားတယ်”” အန်တီက ကျနော့်ပါးကိုနမ်းတယ် “”လိမ္မာတယ် မေမေ့ကိုလည်းဒီအကြောင်းသွားမပြောနဲ့နော် သားလေး သားဦးလေးမသိစေနဲ့ ဦးလေးမရှိတဲ့အခါမှသားလေးအန်တီလုပ်ပေးတာ လိုခြင်ရင်ပြောနော်လုပ်ပေးမယ်””
“”အန်တီလည်း သားကို ခိုင်းနော်သားကြိုးစားလုပ်ပေးမယ်”” အန်တီအမအိမ်သွားလည်ကြတယ် ကျနော့်ကို ကိုရဲထွန်းအမသားလေ တောသားလေးပေါ့ “”အန်တီ့အမက အန်တီနဲ့မတူ ပိန်ပိန်ပါးပါးကြည့်လို့ကောင်းတယ် အန်တီသန်းသန်းတဲ့ အသက်၄၀ ၅၀လောက်ပေါ့ သားဘယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီလဲ မေးတယ် သားကိုးတန်းပါ ဆိုတော့ သမီးနဲ့ရွယ်တူပဲ အငယ်မလို့ အန်တီစန်းစန်းကိုပြောတယ်
အန်တီစန်းစန်းတို့ညီအမတွေ ယောင်းမတွေ စုခါပိုကာဒေါင်းကြတာ ဆိုရှယ်လည်းအတော်ကျပဲ ကျနော့်ကို တောသားခလေးဘာမှမသိထင်ပြီး ဗန်းစကားနဲ့ပြောနေကြတယ် ဆက် ကိစ္စတွေ အန်တီရဲ့အထက်အန်တီညိုဆိုတာ ၄၀လောက်ရှိမယ် ကျနော့်အကြောင်းပြောနေတာ “”အန်တီ့ကို ကျနော်လူပျိုဖြစ်ပြီလား အသက်ကအစမေးနေတယ် ၁၄နှစ်ဆိုတော့ ဆေ့ပ်ဖြစ်တယ် လရည်မထွက်ဖူးပေါ့တားဆေးမသောက်ရဘူးဆိုပဲ”
ဒါမှမဟုတ်သူ့ဩဇာအရိပ်ကမလွတ်ဘူး ကြောက်လည်းကြောက်ကြရတယ်ဆိုတယ် သူလာရင်မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ရဲဘူးတဲ့ ယောက်ျားကအကောင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ အတော်ရင်းပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတော်ရတယ်ဆိုတာ ကျနော်နောက်ပိုင်းကျမှသိရထားပါ သူနဲ့ပတ်သတ်မှုကိုနောက်မှပြောတာပေါ့ အဲဒိနေ့က လူစုံတာနဲ့ပိုကာဝိုင်းလုပ်ကြတယ် ညနေစောင်းအထိ ကျနော့ကို အန်တီသန်းသန်းကသူ့သမီး နဲ့တီဗီဂိမ်းသွားဆော့ခိုင်းတယ်
ကောင်မလေးကနင့်နဲ့ငါနဲ့ပြောတာကိုသီးခံနေရတာအတော်ဆိုးပ ကျနော်ငယ်စဉ်ကကျန်းမာရေးချူခြာလို့ ၂ခါအတန်းအောက်ရတယ် ကျောင်းထားလည်းနောက်ကျတယ် အဖေကပြောဖူးတယ် မင်းမွေးသက္ကရာဇ်တွေငါပိုက်ဆံပေးပြီး ကိုပြင်ထားတာ ဆယ်တန်းတော့မကျနဲ့ဆိုတယ် ကျနော့်ကိုလူတွေသိတဲ့အသက်ထက်ကျနော်၃ နှစ်ပိုကြီးနေတာ ငယ်သူငယ်ချင်းတချို့ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမသိကြ အခုဆိုကျနော့်အသက်၁၇နှစ်တောင်ကျော်နေမှတော့ လူပျိုမဖြစ်ပဲနေမလား အန်တီစန်းစန်းက ကျနော်လရည်တောင်မထွက်သေးဘူးထင်သွားတာ
အန်တီသန်းသန်းအခန်းထဲကုတင်မှာ အိပ်ခြင်သွားအိပ်ဆိုလို့ကျနော်သွားအိပ်တယ်အိပ်မပျော်ပါဘူး အိပ်ပျော်မယ်ကြံတုန်းတံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ တခုခုလာရှာတဲ့အသံ မသန်းဘယ်နားမှလဲ အန်တီညိုပဲ ကုတင်အောက်မှာလို့ အန်တီသန်းသန်းလှမ်းအော်တယ် ကုတင်အောက်ဖင်ကြီးကုံးဝင်နေတာ ကျနော်ခိုးကြည့်မိတယ်အယ်စတုံကြီးအရက်ပုလင်းယူမှန်းသိရတယ် အံမယ်မခေဘူးဗျ
ကျနော့်ကိုကြည့်နေတာ အိပ်ပျော်ခြင်ဆောင်နေရတယ် ကျနော့ခေါင်းကို ပွေ့ခေါင်းအုံးပေါ်တင်ပေးတယ် ရေမွှေးနံ့ရတယ် “”လူငယ်တွေများအိပ်လိုက်ရင် သိုးနေတာပဲ”” အင်္ကျီတွေဆန့်ပေးသလိုလိုနဲ့ပုဆိုးပေါ် ကနေကျနော့်ဟာကို ထိကြည့်တယ် ပြီးတော့ကိုင်ပါလေရော တံတွေးမြိုချတာကျနော်ကြားနေရတယ် ကျနော်အိပ်ပျော်သွားတယ် ညနေမိုးချုပ်စအန်တီတို့ညီအမ တွေအရက်တထွေထွေနဲ့လမ်းခွဲကြတယ် အန်တီက အိမ်ပြန်ရောက်ရေချိုးတယ် ဖုန်းဝင်လာတယ်
ကျနော်ကိုင်လိုက်တော့ဦးလေးအသံသူ့မိန်းမရေချိုးကြောင်းဖြေလိုက်တယ် ရုံးမှာအိပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအန်တီကိုပြောဖို့ ကျနော့်ကိုအိမ်ပြန်ခြင်ပြီလားမေးတော့ ဟုတ်ကဲ့လို့သာဖြေလိုက်တယ်အန်တီညစာပြင်နေတာတွေ့တာနဲ့ဦးလေးက ဒီညရုံးမှာအိပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ် အန်တီလည်းအံ့ဩပျော်ရွှင်သွားပုံရတယ် တယ်လီဖုန်းဆီသွားပြီးဖုန်းနံပါတ်တွေနှိပ်တယ် ဟလို မညို လာမလားဘဲဘဲ ဒီညပြန်မလာဘူး ရှားတောင့်ရှားခဲနော် ပလိစ် အခွေယူခဲ့တဲ့အန်တီ တီဗီရှေ့မှာ အစားအသောက်တွေပြင်နေတယ် ကျနော်ပါကူသယ်ရတာပေါ့ ကားဟွန်းတီးသံကြားတယ် ”
“သား တံခါးဖွင့်ပေးလိုက် တခါတည်း သော့ပြန်ခတ်လိုက် အန်တီညို မင်းဦးလေးမရှိလို့ အဖော်လာအိပ်ပေးမှာ”” အန်တီညိုနဲ့အန်တီအရက်အတူသောက်ကြတယ် အန်တီ ကျနော့်ကို သူတို့နားလာစေခြင်ပုံမရ “”သား အပေါ်ထပ်မှာစာအုပ်တွေရှိတယ် သွားဖတ်ချည် သားလိုတာရှိရင် အန်တီ့ကို လှမ်းပြော””တဲ့ ကျနော့်ရင်ထဲမကောင်းလှ ကျနော်အန်တီခိုင်းတဲ့အတိုင်းအိမ်ပေါ် တက်စာအုပ်တွေ ထိုင်ဖတ်နေမိတယ်
စကားပြောသံများတိတ်ဆိတ်သွားသည်ကို သတိထားမိမှခြေသံခပ်ဖွဖွလှေကားအတိုင်းဆင်းလာခဲ့မိတယ် အောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမှောင်နေတာပဲ အလင်းရောင်ထွက်လာပုံကလင်းလိုက်မှောင်လိုက်အသံကသဲ့သဲ့ အခန်းနံရံကကွယ်နေသဖြင့်အောက်ထပ်အထိဆင်းခဲ့မိတယ် အန်တီတို့နိုင်ငံခြားအပြာကားကြည့်နေကြတာပဲ၂ယောက်စလုံးအတော်မူးနေပြီ အခွေတစ်ခွေပြီးတော့ အန်တီဆိုဖာပေါ်ကထသည် “”မညို ဇေယျာအိပ်ပျော်နေပြီထင်တယ် ကျမသွားကြည့်အုံးမယ်”” “”နင်ကလဲ ကောင်လေးသနားပါတယ် ပျင်းနေမှာပေါ့”
” ကျနော်လည်းအပေါ်ထပ်ခြေဖွဖွ့ မြန်မြန်တက်ရတာပေါ့ စာအုပ်ခပ်ထူထူ၂အုပ်ခေါင်းအုံး ကွေးကွေးလေးပေါ့ “”သား သား “” ကျနော်မထူး “”သားလေးထ “” ကျနော်လူးလိမ့်ထတယ်အောက်ထပ်မီးများပြန်ဖွင့်ထားတယ် ခလေးကွက်ကို စသုံးတယ် အောက်ထပ်လှေကားမှာ အန်တီညို “”အေးပေါ့ ခလေးပျင်းနေမှာပေါ့ ညီးကလည်း”” “”သားဗိုက်ဆာတယ် ရင်လည်းပူတယ်”” တီဗီရှေ့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ရင်း အချိုရည်နဲ့ ရောထားတဲ့အရက်ခွက်ကို မော့ချပလိုက်တယ်
အန်တီက အတင်းတားတယ် မမှီ အန်တီညိုက အန်တီ့ကို လက်ပြတယ် နောက်ထပ်တစ်ခွက်ထည့်တယ် အန်တီကတားတယ် အန်တီညိုက သားစားဆိုပြီး အာလူးကြော်ခွံ့တယ် ကျနော်လည်း ရေဆာတယ် လို့ပြောတော့ အအေးသောက်ဆိုပဲ အရက်ခွက်မော့သောက်ပြီးကျနော်လည်းထိုင်နေတယ် အန်တီညိုနဲ့ကျနော်ထိုင်နေတာက ဆိုဖာအရှည် အန်တီက တစ်ယောက်ထိုင်မှာ သူတို့ညီအမနောက်တစ်ခါးကြည့်ဖို့ ကျနော့်အခြေအနေကြည့်နေတယ်
အန်တီဧည့်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ် ခနအတွင်းအပြောင်းအလဲကိုဖန်တီးထားပြီ “”ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”” “”အူရိုင်းလေးဆိုတော့ မူးတာပေါ့ အေ ဖွင့်မှာသာဖွင့်စမ်းပါ ညီးတူ ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး”” အခန်းမီးမှိတ်ပြီးတီဗီကိုဖွင့်တယ်. အန်တီအောက်စက်ထဲအခွေထိုး ထည့်သံဂလွပ်ကြားရတယ် စားပွဲအရိပ်ကအန်တီညို့ပေါင်ပေါ်အိပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိညကွယ်ထားတယ် အန်တီက ခုံရှေ့တိုးရီမုဒ်ကိုင်ပြီး ရှေ့မှာထိုင်နေတယ် ကျနော်လည်း အန်တီညိုပေါင်ပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးတာကိုပြင်လိုက်တယ်
အန်တီစကတ်ကြားကို လက်ကဝင်ပြီး ပေါင်ကိုဖက်အိပ်တယ်ပေါ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဟက်ကားဖြစ်ပုံရတယ် ကောင်မနဲ့ကောင်လိုးတဲ့အခန်းရောက်လာတယ် အန်တီညို ပေါင်နှစ်ဖက်ပူးကပ်တွန့်လာတယ် ကျနော့လက်က ပေါင်ကြားထဲမှာ အန်တီညိုပေါင်တွေကိုစုပြီး ကျနော့လက်ကို ညှစ်နေတယ် ဒါကိုပဲ ဖီးယူနေတယ် အခွေရပ်သွားတယ် အန်တီ “”ကောင်းခန်းဆိုလုပ်ပြီ “” အခွေပြန်ထုပ်ပြီးအန်တီအခွေကို ခေါက်တယ် ”
“မှိုတက်နေတာ”” အခွေပြန်ထည့် ဂလွပ် အခွေရစ်ကျော်သံကြားရ အန်တီညိုကကျနော့်ခေါင်းကို ပေါင်ရင်းမရွေ့တယ် ကျနော့်လက်ကလည်းပေါင်ရင်းကို ဖက်လို့ပေါ့ ကောင်နဲ့ကောင်မနမ်းကြပြီး အဝတ်တွေချွတ် ကောင်ကကောင်မအဖုတ်ကို ယက်ပေးတယ် အန်တီညို ကျနော့်ဆံပင်တွေကိုခပ်ဖွဖွလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ကောင်မအော်သံကြားရတယ် ”
“အား အိုးရက်စ်”” အန်တီညို ပေါင်၂ဖက်ကားသွားတယ် ကျနော့်လက်လည်း အန်တီညို့ စောက်ဖုတ်ကြားကျသွားတယ်ပေါ့ အန်တီညိုကတော့ ပေါင်ကားလိုက်စုလိုက် အပြာကားထဲကအတိုင်းဖီးတက်နေတယ် ကောင်မကယက်ပေးတဲ့ကောင်ကိုဆံပင်တွေသပ်ပေးသလို ကျနော့်ခေါင်းကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ပွေ့ရင်း သပ်ပေးနေတယ် အစားထိုးခံးစားမှုပေါ့ အန်တီညို့ အဖုတ်နဲ့ကျနော့်လက်မထိတထိ အန်တီညို ဆိုဖာအောက်လျှောချဆက်တီပေါ်ခြေလှမ်းတင်တယ်
ကျနော့်လက်က စောက်ဖုတ်ထဲ ကျနော့လက်ညိုးက စောက်စိ လက်ခလယ်ကစောက်ဖုတ်ထဲ အန်တီညိုသာသာကလေး လှုပ်တယ် ကျနော်ကိုယ်လှည့်ခါ အန်တီညို့ဘက်လှည့်အိပ် လက်ကိုလည်းတခါတည်းကစားပေးလိုက်တယ် အန်တီညို အိမ်သာလားဟေ့ အန်တီ့ကို ပြောသံကြားတယ် ရေသွားဆေးတာဖြစ်မယ် အန်တီမရှိတော့အန်တီညိုကျနော့်လက်ကို တွန်းထည့်လာတယ်
ကျနော်အလိုက်သင့်ကလိပေးတယ် အန်တီပြန်ဝင်လာပြီး ကျမ မရတော့ဘူးအိပ်တော့မယ်တဲ့ တော်သေးကျနော့်ကိုသတိမရလို့ အန်တီညိုကျနော့်ပုဆိုးလှန်ထားတာကို မြင်သွားပုံရတယ် ကျနော့်ကိုခွဖင်တပြန်ခေါင်းတပြန် တံတောင်ထောက်တီဗီဖက်လှည့်ခါ ကျနော့်လီးကိုဆွတယ် အန်တီညိုအဖုတ်နံ့က ကျနော့ကိုခေါ်နေတယ် ကျနော်ရှေ့တိုးတော့ကျနော့ပုခုံးအပေါ်ခွပေးရင်း ဘယ်ရမလဲ ကျနော်အဖုတ်ကိုယက်တော့တယ် အန်တီညို အော်လာတယ် တီဗီရပ်သွားတယ်
အန်တီညိုကျနော့်ကိုနှိုးတယ် “”သားသားထ “”ကျနော့်ကိုထူတယ် “”သားမူးနေလား””ဟုတ်”” “”ခနလေးထိုင်အုံး အန်တီပြန်လာခဲ့မယ်”” အန်တီ့ညို့ကို သွားခြောင်းပုံရတယ် တီဗီပိတ်လိုက်တယ် ကျနော့်ကိုဖက်ပြီး ကျနော့်လီးကို ဆွတယ် ကျနော့်လီးတောင်လာတယ် “”သား ကောင်းလား””””ကောင်းတယ်”” အန်တီ့ညို့ပါးကိုကျနော်နမ်းလိုက်တယ် အန်တီညိုက နုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းဖို့ဆွဲယူတယ် အန်တီညိုဦးဆောင်နမ်းသမျှကျနော်လိုက်ပေးတယ်
အလုပ်သဘောသိသွားတဲ့အနေအထားနဲ့ ကျနော်ပြန်နမ်း အန်တီညိုအဝတ်အစားတွေချွတ်ခါကျနော့်ကို သူ့နို့ဆီ ရွှေ့ပေးတယ် နို့သီးတွေကမာတောင်နေတယ် ကျနော့်အင်္ကျီကိုပါချွတ်တယ် နောက်တော့မခိုင်းရဘဲ အန်တီညိူ့စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပလိုက်တယ် အော်ချက်ဗျာ အန်တီညို ကျနော့်ကို အပေါ်တက်ခွ ခိုင်းပြီး ကျနော့်လီးကို သူ့အဖုတ်ထဲထည့်ပေးတယ် “”သား ဆောင့်ထည့်နော်”” ကျနော်အတွေ့အကြုံမရှိလေဟန် ချော်ထိုးတယ် ဖင်ပေါက်ကို တေ့ထိုးတော့ “”မဟုတ်ဘူး အား သေသေချာချာကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖို့ ကျနော့်ဖင်ကိုပါ လက်တစ်ဖက်နဲ့ကစားပေးတယ် စိတ်ချရတော့မှ ဖီးယူနေတယ်
ကျနော်အားကုန်ကိုလိုးပေးတယ် သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်တာမနားဘဲဆက်လိုးတယ် ကျနော်တချီပြီးတာမရိပ်မိ အန်တီညို အဖုတ်ကခြောင်နေပြီ အန်တီညိုက “”သားပက်လက်လှန်လိုက်”” ကျနော့်အပေါ်ကတက်ခွ လီးကိုယူပြီး လှိမ့်နေတယ် “”သားရလား အန်တီ့ဖိထားတာ ခံနိုင်လား”” ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ အန်တီညိုစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လှုပ်ရှားတော့တယ် ကျနော့်ကိုဆွဲထူတယ် ကျနော်ကအန်တီညို့ နိုးကြီးတွေဆွဲစို့ အန်တီညို့တင်ပါးရိုက်သံ အော်သံတွေဆူညံနေတယ်
အန်တီညို ပြီးသွားတယ် ကျနော့်ကို ချစ်တယ်ခလေးရယ် တဲ့ ဘယ်ရမလဲ အန်တီ့ညိုကို ကျနော်ဆွဲလှည့်ပြီး လေးဘက်ထောက်လိုးပစ်တယ် အန်တီညို အော်လိုက်တာ ကျနော့်သုတ်တွေနောက်တခါပန်းထည့်ပြီး ခြောင်ကျိလာတာနဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ခပ်မြန်မြန်ထိုးထည့်လိုက်တယ် တခါတည်းဆောင့်လိုးတာ” “”သားရယ်ဘယ်ထဲထည့်နေတာလဲ “”လိုးရတာစီးစီးပင်ပင် စအိုကပြန်ညှစ်တော့အတော်ကောင်းလှတယ် အန်တီညိုခါးကိုကိုင်ပြီး မတ်တပ်ထလိုးတယ် အန်တီညိုလည်းအရသာအသစ်ကို ကြိုက်သွားရှာတယ်
ကျနော်လည်း စောက်ဖုတ်ထဲပြောင်းလိုးရင်း နောက်ဆုံးအချီပြီးသွားတော့တယ် မနက်နိုးလာတော့ အန်တီညိုမရှိတော့ အန်တီဈေးပြန်လာတာတွေ့တယ် မနက်စာစားကြပြီးတော့ အန်တီညကအရက်သောက်ထားလို့ ခေါင်းနောက်အကြောတက်နေလို့ ကျနော့်ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ် ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျနော့်ဂွေးကို ထုပေးတယ် သူ့ဘာသူလုပ်ပေးရင်းကိုစိတ်ပါလာပြီး ကုန်းစုပ်တော့တယ် ကျနော်လည်းနှိပ်တာမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓကိုယ်အနှံ့ပွတ်ပေးနေမိတော့တယ် အန်တီဆံပင်တွေကို ထိုးဖွရတာအရသာဗျာထမိန်ပေါ်ကနေတင်ပါးကြီးကိုပွတ်တယ် နောက်တော့နို့တွေကို နှိုက်ပေါ့ အန်တီမောသွားတယ်နဲ့တူတယ် ပက်လက်ကလေးလှန်ပြီး ဒူးလေးတွေထောင်လို့ “”ဒီဘက်ဘေးလာလေ လက်နဲ့လုပ်ပေးမယ်””
“”အန်တီမောနေမယ် သားပြန်လုပ်ပေးမယ်””ဒူးနှစ်ဖက်ကြားထမိန်ထဲဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကိုယက်ပေးလိုက်တယ် အန်တီ ထမိန်ဆွဲတင်ပြီး ကျနော့်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကျနော့်ဆံပင်တွေ ဖီးသင်ပေးနေတယ် လျှာနဲ့အစိကိုဖိထိုးပေးတယ် ချော်သွားတယ် လျှာနဲ့လိပ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့စုပ်တယ်
“”ပြွတ် အား သားသား ကောင်းလိုက်တာခလေးရယ်”” အန်တီ့ကို နာရီဝက်လောက်ရှယ်ယက်ပေးလိုက်တာ “”သားသား သားဟာလေးကို အန်တီ့ထဲထည့်လိုက်တော့”” ကျနော့်ကို သူ့အပေါ်ဆွဲယူတယ် ပေါင်ကို ကားပေးပြီး ကျနော့်လီးကို သူ့အဖုတ်ထဲ ထည့်ပေးတယ် ကျနော်ယက်ထားတာရယ် အန်တီ့စောက်ပတ်အရည်တွေရယ် အမွှေးတွေပါစိုနေတယ် ”
“သား ထိုးထည့်တော့ ” ကျနော့တင်ပါးကို ဆွဲယူတွန်းပေးတာ ပလွတ်ခနဲဝင်သွားတယ် အန်တီစောက်ဖုတ်က အန်တီညိုစောက်ဖုတ်လောက်မကျယ်သေး ခလေးမမွေးတာကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ် လိုးနေရင်းအန်တီ့နို့ကို အကျီင်္အပေါ်ကကိုင်လုပ်တာ အန်တီ့က လှန်ပေးတယ် နို့ကိုင်လိုးရတာ အတော်ကောင်းတယ် အန်တီပါးစပ်ကြီးဟ အော်ရှာတယ်
“”အင်း အင်း အား”” ဟနေတဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကျနော့်လျှာထိုးသွင်းတော့ အန်တီက လျှာကိုလီးစုပ်သလိုပြန်စုပ်တယ် ကျနော်ကလူငယ်ဆိုတော့အားပါတယ် ကြမ်းတယ် လှေကြီးထိုးရိုးရိုးနဲ့ တချီဆိုတချီ “အန်တီ အန်တီ့ထဲကအရည်တွေထွက်လာတယ်”” ဆိုပြီးကျနော့်လရည်တွေကိုအမြန်သုတ်ရတယ် ”
“အာ့ဘာဖြစ်လို့လဲ””ဟဲဟဲ သိတယ်မလား “”ကောင်းလို့ပေါ့ သားလေးရဲ့””” အန်တီနဲ့ကျနော် တစ်နေ့ကို၂ကြိမ် အနည်းဆုံးတစ်လလောက်လိုးကြတယ် ပြန်ခါနီးမှာ ရေချိုးခန်းထဲအန်တီစုပ်ပေးတော့ “အန်တီ ကျနော့်ဆီမှာလည်း အရည်တွေထွက်နေတယ်”” အန်တီသေသေချာချာကို ကိုင်ကြည့်တယ် “”အထဲမထည့်နဲ့တော့”. “ဘာပြု”” “ဗိုက်ကြီးလိမ့်မယ်”” ကျနော်ရန်ကုန်ကပြန်လာပြီးနောက်၎လခန့်မှာအန်တီကိုယ်ဝန်ရတယ်သူ့ယောက်ျားဆေးသောက်လို့ မြုံနေတာ ကောင်းသွားပြီထင်နေရှာပေါ့.……